Gudoomiyaha gobolka Madheera, Cali Roba oo sheegay inuusan ka sii aamusi karin dhaqdhaqaaqyada kooxda Al-shabaab ee ka socda deegaankiisa. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Gudoomiyaha gobolka Madheera, Cali Roba oo sheegay inuusan ka sii aamusi karin...
Gudoomiyaha gobolka Madheera, Cali Roba oo sheegay inuusan ka sii aamusi karin dhaqdhaqaaqyada kooxda Al-shabaab ee ka socda deegaankiisa.
Labo sano ayaa kasoo wareegtay weerarkii Al-Shabaab ay weerartay hoteelka Dusit D2 ee bartamaha magaalada Nairobi, halkaas oo ay ku dileen 22 qof. Balse sanad guuradan ayaa imaaneysa iyadoo magaalada Mandheera Kenya, oo kutaala xadka Soomaaliya ay kusii kordhayaan weerarada kaga imaanaya Al-shabaab iyadoo laga cabsi qabo inay la wareegaan gacan ku haynteeda.
Gudoomiyaha gobolka Madheera, Cali Roba, ayaa sheegay jimcihii inuusan ka sii aamusi karin dhaqdhaqaaqyada kooxda Al-shabaab ee ka socda deegaankiisa.
Maalintii Isniinta ayay ahayd markii dagaalyahano katirsan Al-Shabaab ay weerareen bas ku sugnaa magaalada Mandheera isla markaana ay afduubeen seddex qof sida ay sheegeen saraakiisha amaanka ee dowladda Kenya.
Cali Roba waxa uu ku andacoonayaa in dagaalyahanada Al-Shabaab ay marin ka dhigtaan kala bar wadooyinka gobolada, eedeymahaas oo ay beeniyeen saraakiisha amaanka ee Kenya.
“Aniga oo ah Gudoomiyaha Gobolka Mandheera, waxaan si cad oo awood leh u sheegayaa in in ka badan 50 boqolkiiba wadooyinka gobolada ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab,” ayuu yiri guddoomiyaha Mandheera.
Al-Shabaab ayaa weeraro ka geysanayey dalka Kenya muddo toban sano ah, tan iyo markii ay Kenya ciidamadeeda u dirtay gudaha Soomaaliya si ay u caawiyaan howlgalka Midowga Afrika ee loo idmaday in ay difaacaan dowladda Soomaaliya.
Previous articleWasaaradda arrimaha gudaha Jabuuti oo cambaareysay weerar habeen hore lagu qaaday saldhig ciidan oo ku yaalla gobolka Tajuura.
Next articleShirka looga hadlayo horumarinta geela oo Jigjiga lagu qabtay
Heshiis laga gaaray colaadda Soomaalida iyo Oromada Dalka Itobiya
Madaxweynayaasha maamullada deegannada Soomaalida iyo Oromada iyo goleyaashooda wasiirrada ayaa heshiis ka gaaray dagaallo muddo ka dhex taagnaa qowmiyadaha Oromada iyo Somalida oo ku...
Al-Shabaab oo degmada Jilib xukunno kula fuliyey seddax qof kuwaas oo...
Gudoomiyahii Gobolka Geddo ee garabka Dowlada Federaalka oo xilka...
Dowlada Kenya oo war la soo saartay Dagaalkii BaladXaawo
Banaanbaxyo waa weyn oo gil gilay muqdisho looga soo Horjeedo Farmaajo
Soomaaliya oo 2020 marti galisay Qaxootigii ugu badnaa ebid
Kooxo burcad ah oo muwaadin soomaaliyeed ku dilay Koofur Africa
Mareykanka oo ka carooday diyaaradaha dagaalka ee uu Ruushka ka iibinayo...